Toriteny 15 Desambra 2013 | FJKM Amboniloha
Toriteny 15 Desambra 2013
Isaia 35:1-4 / Jaona 14:1-7 / Galatiana 5:2-6
Andalan-tsoratra Masina torina ho an’ny ny mpino rehefa sendra ady sarotra indrindra manoloana ny fisarahana sy trotraky ny adim-piainana. Fa inona no ifandraizan’izany amin’ny hoe : “Manantena ny fihavian’ny Tompo ny mino“ Manasa anao ny Tompo handray tsara ny hafatra ampitaina aminao anio .
1- Tsy mifarana eto an-tany ny fianan’ny zanak’olombelona
Ny bokin’Isaia dia milaza fa isika olombelona dia tsinontsinona , ary tsy manahoana akory manoloana ny fahalebiazan’Andriamanitra , nefa dia ampanantenainy sy omeny toky fa anamboarany toeram-boninahitra ao amin’ny fanjakany rahatrizay miala ety an-tany.
Ahoana ary hoy ianao no ahatanteraka izany ?
Efa voaoman’I Jesoa Kristy ny momba izany asam-panavotana izany tamin’ny nandatsahany ny rany teo ambony hazo Fijaliana. Izany hoe, ny olona izay mino sy manaiky an’I Jesoa dia manana anjara FAHASOAVANA ao amin’Andriamanitra . Raha adika tsotra dia ireo no antsoina hoe olona voavela heloka. Betsaka ny ady sarotra sy ny fahoriana tsy maintsy lalovan’ny mino raha mbola ety an-tany, ary ny tenin’Andriamanitra dia efa milaza sahady fa any am-parany dia hisy fihemorana ara-panahy ny Kristiana, ho tia tena, ho tia vola, tsy manaja izay Masina, sns…. Aoka hitoetra ho mahatoky ianao, aza mihozongozona, aza miherikerika, izahao toetra ny Fanahy ao anatinao, ary ataovy ny asan’Andriamanitra. Toky omen’ny Tompo ho anao anio : tsy misy tsy ho tanteraka ny Teny rehetra izay voalazan’Andriamanitra dia ny hanandratra anao ao amin’ny toeram-boninahitra mandrakizay ao amin’ny Fanjakany.
2- Tsy ho azoazo foana ny toeram-boninahitra fa mitaky fepetra
Maro ny Kristiana mbola latsaka ao anatin’ny fandriky ny devoly ka mihevitra fa rehefa ampy ny ilaina rehetra amin’ny fiainana, dia izay no antoka hampitoetra ny fiadanana. Fa ahitsin’ny Tenin’Andriamanitra kosa ; fa Jesoa Kristy irery ihany no antoka mitondra fianana sy fiadanana “Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana”; Izany hoe ny olona manana an’I Jesoa eo amin’ny fianany , ireo no olona afaka mitoetra mandrakizay ary tsy ho meloka amin’ny fiandrasana ny fihavian’ny Tompo. Io no fepetra tsy maintsy takiana. Ekena fa mavesatra ny Hazo Fijaliana entin’ny Kristiana, dia ny fanoherana ny maha nofo, mimonomonona sy mitady hevitra hanesorana izany hazo fijaliana izany, ampahafantarina anao ry Kristiana namako fa ny Hazo Fijaliana dia tsy iza fa Jesoa Kristy izay hany lalana tokana hiampitana ao amin’ny Fianana mandrakizay.
Sambatra isika manana an’I Jeso, ny fampianarana anio, dia manaporofo fa tena tia antsika Andriamanitra ka tsy reraka manambara antsika ny amin’ny zava-miafin’ny fihaviany izay tsy maintsy ho avy. Mba tsy hitondra fanamelohana ho ahy sy ho anao ny fahalalana an’Andriamanitra saingy raraka am-pandehanana.
Te ho mpiara-mandova ao amin’ny Fanjakan’ny lanitra ve ianao ? Raiso ary ekeo Jesoa izay efa miandry eo ambaravaran’ny fonao. Handray an-tanana ny fiananao Izy ; ary hanandratra anao ho amin’ny toeram-boninahitra mandrakizay.
RANDRIANARISOA Hajaniaina Célestin, Mpitandrina
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 16 décembre 2013